Matattoo echiGreek, budiriro yese paganda rako | Kunyora nyora
Matattoo echiGreek, budiriro yese paganda rako
Ma tattoo echiGreek anofemerwa neimwe yengano uye yakapfuma budiriro muWest, muGiriki. Ndicho chikonzero nei ma tattoos aya achizivikanwa uye anoratidza zvakasiyana-siyana zvakasiyana-siyana zvekugadzira uye zvingaita.
Kubva kuvamwari kusvika kune yakapfava echiGiriki calligraphy, achipfuura nepakati pemabasa ake akanakisa, aya ma tattoo echiGreek achafadza vateveri vemitauro yemhando yepamusoro. Uye, kana iwe uchifarira nyaya yacho, tinokurudzira kuti uverenge ichi chimwe chinyorwa nezvazvo Vanamwari veOlympian tattoos: Zeus, Poseidon uye Medusa.
1 Magamba echiGiriki, vamwari uye zvikara
1.1 Varwi vechiGiriki
1.2 Vamwari vechiGiriki nezvavanoreva
1.3 Zvikara uye zvimwe zvisikwa
2 Mamwe mazano akawanda
2.3 Arifa naOmega
Magamba echiGiriki, vamwari uye zvikara
Sezvatakataura, Mhando iyi yema tattoos inosiyaniswa nekufemerwa neimwe yekare budiriro muWest, nezvavanofungidzira uye zvavanoreva zvichave zvakapfuma uye zvichanyanya kuenderana nengano dzavo, umo tinogona kuwana magamba, vamwari uye zvikara nezvimwe zvisikwa. Semuyenzaniso:
MaGiriki, kunyangwe vaive "vakabudirira" kupfuura vaRoma (vaida zvikuru mashoo akazara neropa uye adrenaline senge kurwa kusvika pakufa kwevarwi vehondo), vaivewo muvarwi vavo sampuli yezvavanoda zvebudiriro yavo. A) Hongu, kunyora nyora murwi wechiGiriki kunomiririra simba remuviri, ushingi uye kubudirira muhondo. MaGiriki zvakare ane mamwe magamba ane mukurumbira ehondo akanakira kurudziro kana zvasvika pakutora tattoo.
Achilles, mumwe wemagamba ake ane mukurumbira zvikuru, akanga ane simba rinopfuura romunhu uye ane nzvimbo isina simba yakanga iri muchitsitsinho.
Munhu wose anoziva hukuru Hercules, uyo nemabasa ake gumi nemaviri (ayo akanga asiri kunyatsotora chingwa) akaisa simba rake noushingi pakuedza.
Atalanta Iye igamba rinozivikanwa rechiGiriki, akarerwa nemapere mushure mekunge vabereki vake vamusiya mugomo. Hugamba hwake hunozivikanwa zvikuru kuuraya mazana maviri akaedza kumuuraya.
naPerseus anonyanya kuzivikanwa nekuuraya murombo Medusa nenhoo umo airatidza chiso chechikara kuti achinje ibwe.
Odysseus (anonyanya kuzivikanwa neshanduro yake yechiLatin, Ulises) akafamba kwemakore gumi kusvikira adzokera kumba, uko Penelope akanga akamumirira, uye akava nezviitiko zvakawanda achiyambuka mvura yeMediterranean.
Pakupedzisira, kunyange zvazvo kune zvimwe zvakawanda, nyaya ye heroine inofadzawo zvikuru Ariadna, iyo yakabatsira Theseus kubuda mulabyrinth kutenda kune skein yeshinda yaimudzivisa kurasika.
Vamwari vechiGiriki nezvavanoreva
Pamusoro pemagamba nevarwi, vamwari vechiGiriki zvakare inonakidza kwazvo tattoo, kunze kwekunyatsoenderana nezvazvinoreva, zvichiita kuti zvive nyaya yakakodzera kune avo vanoda tattoo ine mavara uye chimwe chinhu chiri pachena. Semuyenzaniso:
Poseidon Ndiye mwari wemakungwa nokudengenyeka kwenyika. Itsika kumumiririra nekatatu uye asina hembe. Ndiye mukoma waZeus uye mumwe wevamwari vanokosha vechiGiriki.
Athena Ndiye mwarikadzi wouchenjeri, asi akanga ariwo murwi anotyisa. Patron weAtene (kubva kwaari akagamuchira zita) anomiririrwa mune zvakawanda zvivezwa. Kazhinji inoperekedzwa nezizi, nhoo uye pfumo.
Aphrodite ndiye mwarikadzi werudo, runako uye mbereko. Chirevo chake chinonyanya kuzivikanwa inguva yekuzvarwa kwake, paanosimuka kubva mumubatanidzwa pakati pefuro regungwa uye nhengo dzakachekwa dzababa vake, Uranus.
Zeus Ndiye mwari wechiGreek par excellence, ane simba zvakanyanya uye anogona kunge ari mumwe weanonyanya kuzivikanwa kutenda kuchombo chake, mheni. Mune tattoo, inotaridzika inoshamisa mune dema uye chena kuti ipe dhirama, chimwe chinhu icho mwari uyu anonyatsoziva.
Zvikara uye zvimwe zvisikwa
Pakupedzisira, zvikara uye zvimwe zvisikwa zvakajairwa nengano dzeGreek zvakare zvinotaridzika zvakanaka mune iyi tattookunyanya kana ukasarudza dhizaini chaiyo. MuchiGreek fungidziro kune zvakawanda zvezvisikwa zvakasiyana, pakati pazvo zvinotevera zvinomira pachena:
Hapana mubvunzo Medusa Ndechimwe chezvisikwa zvechiGiriki zvinonyanya kuzivikanwa uye zvine nyora (uye zvakare zvine zvitaera zvakawanda: zvechokwadi, katuni, zvechinyakare…) pamwe nekuda kwechimiro chayo chinoshamisira, mukadzi ane nyoka pachinzvimbo chebvudzi. Mune tattoo iyi, inowanzosarudzwa kuti ipe kurapa kwakakosha kumaziso echisikwa ichi, iyo inonzi inokwanisa kukushandura iwe kuva dombo.
Kunze kweiyo superhero, iyo Cyclops Icho chisikwa chikuru chine ziso rimwe chete chengano, chakagadzirwa kubva kuTitans, chichiita chikara chinotyisa uye chine hukama zvakanyanya nemasimba echisikigo.
ari centaurs Ivo hafu yemunhu nehafu yebhiza, varwi vanotyisa uye tattoo huru, hongu. Vanofananidzira simba, rusununguko uye nyota yekufamba kwevaya vanoipfeka.
Pakupedzisira, the mermaids Vakadzi vechiGreek havana kutapira uye vakakosha senge mermaid mudiki, pane zvinopesana, iwo mamonya anotyisa akapengesa vafambisi vezvikepe. Odysseus akazvisungirira necheni kumucheto wechikepe chake kuti anzwe vachiimba asi kwete kutakurwa nemanzwi avo emashiripiti.
Mamwe mazano akawanda
Matattoo echiGreek haangonwi chete kubva kungano dzebudiriro iyiIvo vanogona zvakare kufemerwa nemamwe akawanda motifs kubva kune iyi yakapfuma tsika. Semuyenzaniso:
Mutsara kana izwi muchiGiriki rinogonesa chero chaunoda muchimiro. Iwe unogona kusarudza chiGiriki chemazuva ano, asiwo chiGiriki chekare, uye unomutsa, mumashoko, tsika dzayo dzose dzinoshamisa. Rangarira, kune idzi kesi, tsvaga tattooist inyanzvi mucalligraphy uye ita shuwa kuti vanoisa zvaunoda muzvinyorwa.
Uye isu hatiendi kure kure necalligraphy, sezvo rimwe remabasa makuru maunogona kufemerwa inhetembo ye Odyssey, iyo inorondedzera makore gumi mugungwa reOdysseus, murume waPenelope. Chidimbu chechinyorwa chinoperekedzwa neimwe yeanonyanya kuzivikanwa mapikicha chinotaridzika zvakanaka mune tattoo.
Kunyangwe iwo ma protagonist ari mavara, zvinoreva iyi tattoo yechiGiriki ndeyechitenderomaererano naMwari. Mu<em>apocalypse zvinonzi iyi ndiyo arufa neomega, ndiko kuti, bhii rekutanga nerokupedzisira rearufabheti yechiGiriki, inzira yakati rebei yokutaura kuti chinhu chiri chose.
Pakupedzisira, iyo miganhu ndeimwe yekufuridzirwa kwaunogona kuwana yeGreek tattoo. Ndiwo mamwe emhando dzemhando yepamusoro dzetsika iyi uye, se tattoo, anonyanya kutonhorera sebracelet paruoko kana wrist.
Tinovimba isu takakukurudzira iwe nekusarudzwa kukuru kwechiGreek tattoos, zvakare, unogona kushanyira iyo mafoto gallery pakupera kwechinyorwa. Tiudze, une ma tatoo emhando iyi here? Chii chinonyanya kukukurudzira? Wasarudza chimiro chipi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Kufungidzira Tattoos » Matattoo echiGreek, budiriro yese paganda rako
Minimalist bhasikoro tatoo, kukunguruka newe
Alien tattoos, kurudziro kubva kunze